१० वर्ष देश विकासमा लगाउनेछु – Rajdhani Daily
१० वर्ष देश विकासमा लगाउनेछु
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा उम्मेदवार चितवन–३
उम्मेदवारका रूपमा चितवन आउँदा कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
उत्साहपूर्ण छ । पार्टी विशेषभन्दा पनि सबैमा उत्साह देखेको छु । ‘प्रचण्ड चाहिन्छ’ भन्ने भावनाको विकास भएको पाएको छु । ‘हामी सहयोग गर्छौ’ भन्नेहरू बढ्दै गएका छन् । चितवनमा पार्टीगत गुटगतभन्दा धेरै अगाडि बढेको महसुस भइरहेको छ । क्षेत्र नम्बर ३ को ७ वटा वडामा म पुगिसकेको छु । अन्य क्षेत्रबाट सकारात्मक रिपोर्टिङ आइरहेका छन् ।
तपाईंको प्रतिस्पर्धा कोसँग हुँदै छ ?
अहिले मेरो खासै प्रतिस्पर्धी छैनन् । नेपाली कांग्रेसले आफ्नै चुनाव चिह्नमा उम्मेदवार उठाएको भए मैले गतिलो प्रतिस्पर्धी पाउँथें । कांग्रेसले एक जना ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई समर्थन गरेकाले अहिले मेरो प्रतिद्वन्द्वी छैन । विकास निर्माणको काममा राम्रो कनेक्टर भएकाले ठेकेदारकै काम गर्दा राम्रो हुन्छ । राजनीति गर्नेलाई राजनीति गर्न दिए हुन्छ । चितवनका जनताले विकास चाहेका छन् । त्यो म पूरा गरिहाल्छु । मेरो उमेरको १० वर्ष विचार र संगठन विकासमा बिताएँ । अर्को १० वर्ष गणतन्त्र, समावेशीका लागि युद्धमा बिताएँ । अर्को १० वर्ष शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा खर्च गरेको छु । अब १० वर्ष देश विकासमा लगाउने सोचमा छु । समाजवादसँगै राष्ट्रिय पुँजीको वृद्धिमा लाग्छु ।
चितवनमा धान रोप्ने मौसममा भएको गठबन्धन काट्ने समयमा फेरिएको छ । यसको असर कस्तो पर्ला ?
सहकार्य जोसँग पनि हुन सक्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विचार सिद्धान्तको हिसाबले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको एकता कहिल्यै हुनै सक्दैन । एमाले र कांग्रेसबीचको एकता पनि कहिल्यै सम्भव थिएन । एकता हुने भनेको कम्युनिस्टहरूबीच नै हो । अहिले कम्युनिस्टहरू एक हुन्छौं भनेपछि कांग्रेस पनि एक हुन थालेका छन् । जस्तै, गच्छदारजीहरू पनि मिल्नुभयो । यो त कांग्रेसका लागि राम्रो अवसर पनि हो नि । यसो भनिरहँदा भोलि कांग्रेससँग सहकार्य हँुदै हुँदैन भन्ने होइन । कार्यगत सहकार्य पक्कै हुन्छ । तर अहिले देशमा स्थायित्व र स्थिर सरकार चाहिएको छ । आजको आवश्यकता यही हो । सबै मिल्ने पक्षहरू मिल्नुपर्छ । जनताले राम्रो काम गरे २५ वर्ष जिताउँछन् । नराम्रो काम गरे पाँच वर्षमै हराउँछन् । विगतको जस्तो छोटो समयमा सरकार ढाल्ने खेल बन्द गराउनकै लागि यो गठबन्धन हो । एमालेसँगको यो एकताको प्रयास अहिलेको होइन । मदन भण्डारीकै पालामा पनि प्रयास भएको हो ।
चितवनलाई राजधानी बनाउने अभियानबारे तपाईंको धारणा के हो ?
चितवन राजधानीका लागि उपयुक्त जिल्ला हो । भूगोलविद्लगायत धेरै विशेषज्ञको सुझाव राम्रै छ । चितवन सम्भावना भएको क्षेत्र हो । तर अहिले चुनावको मुखमा ठोस रूपमा भन्ने आधार तय भइसकेको छैन । पछि रेल मार्ग, सुरुङ मार्गलगायतका संरचना बनिसकेपछि सबैले भन्छन् कि चितवन नै राजधानी हुनुपर्छ । प्रदेशको राजधानीको विषयमा पनि छलफल भइरहेकै छ ।
तालमेलको प्रभावलाई कसरी आँकलन गर्नुभएको छ ?
तालमेल सफल रूपमै अगाडि बढिरहेको छ । आम जनतामा खासगरी वामपन्थीहरूमा उत्साह छ । सुरुमा पार्टीभित्र टिकटलगायतका कुराले केही दिन अप्ठेरोजस्तो देखिएको भए पनि अहिले बिस्तारै लय लिएको छ । आपसी तालमेल स्वाभाविक भए पनि दुई पार्टीबीचमा चुनावी तालमेलसहितको एकतासम्ममा पुग्नु कठिन काम हो । एउटै पार्टीमा त उम्मेदवार मिलाउन कति कठिन हुन्छ, दुई पार्टीबीचमा मिलाउन निकै कठिन थियो । त्यो हामीले मिलायौं । अब नमिल्नुपर्ने विषय केही छैनन् ।
माडी पुग्दा पनि बाँदरमुढे घटनापीडितलाई नभेटेको गुनासो छ नि ?
माडीमा तय भएको कार्यक्रममा हामी पुग्नु पहिल्यै पार्टीका नेता अमिक शेरचनसहितको टोली पुगेर पीडितसँग कुराकानी भइसकेको थियो । मैले सोही बेला माडीको कार्यक्रममा बाँदरमुढे घटनाको विषयलाई फोकस गरेरै बोलेको छु । म फेरि माडी जाँदै छु । माडीको बाँदरझुलामा ४ मंसिरमा पुग्ने योजना छ । म सबै पीडितलाई भेट्छु ।
निर्वाचनको प्रचारको क्रममा विभिन्न जिल्लामा बम प्रहार भइरहेको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो राम्रो काम होइन । यसलाई मैले थ्रेटको रूपमा बुझेको छैन । विप्लव समूहबाट माओवादी केन्द्रमा धेरै आए । केन्द्रीय सदस्यसहित हजारौं आए । रोल्पा रुकुमजस्ता जिल्लामा आतंकको अवस्था छ । ढुंगा मुढा, ग्रिनेट, बम प्रहार भएका छन् । त्यति ठूलो होइन । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अलि कठिन रोल्पा, रुकुममा हो । कांग्रेस र विप्लपसँग साँठगाठ भएको रिपोर्टिङ आएको छ । सो क्षेत्रमा हतियारसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई तत्काल छुटाउन सोही क्षेत्रमा मन्त्रीले विज्ञप्ति जारी गर्नुले थप शंका पैदा गरेकै हो । केन्द्रमा रहेको कांग्रेसभन्दा स्थानीयस्तरमा रहेका कांग्रेसबाट केही समस्या भएको हामीले बुझेका छौं । हामी प्रधानमन्त्रीलाई यो नियन्त्रण गर्न अनुरोध गर्छौं । तालमेल जोसँग पनि गर्न पाइयो । तर आतंक मच्चाउन पाइन्न ।
दुई पार्टीमा विचार फरक छ । एकता कसरी होला ?
मान्छेका लागि सिद्धान्त हो, सिद्धान्तका लागि मान्छे होइन । मिल्ने कुरा मिलाउने, नमिल्ने कुरा हटाउने । समाजवाद, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, आर्थिक समृद्धि नै अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसमा नमिल्ने विषय केही छैन । माओवादको विषय हो । यसलाई महाधिवेशनसम्म लैजान सकिन्छ । हिजो प्रचण्डपथ थियो । त्यसलाई स्थगन गरेर राखिएको छ । अब सिद्धान्तको पछि लागेर राष्ट्रलाई दुःख दिने होइन सिद्धान्तभन्दा राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने समय आएको छ । राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर सिद्धान्त मिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट समाजवाद सम्भव छ ।
पार्टी एकताचाहिँ कहिले हुन्छ ?
चुनावलगत्तै पार्टी एकता हुन्छ । अब पार्टी एकता हुने विषयमा शंका छैन ।
प्रस्तुति : राधेश्याम खतिवडा